Hiran State - News: HS:- Qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Belet Weyne.
HS:- Qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Belet Weyne.
HS:- Gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lagu qarxiyey gudaha xarunta degmada Belet Weyne iyadoona ay jirto dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay dadkii ka ag dhawaa goobta u qaraxu ka dhacay.
Gaarigani oo ahaa nooca loo yaqaano Hoomeyda ayaa ku guul dareystay inuu gudaha u galo goobo muhiim ah oo ku yaala magaalada Belet Weyne iyadoona markii danbe qofkii waday uu si xoog ah ula galay goobta uu ku qarxay.
Waxaa laga yaabaa in ay falkaan wax ka ogyahiin kooxaha ku sugan magaalada kadib markii ay soo baxeen in Hiiraan loo sameynayo maamul aan aheyn kuwa hada jira Shabaabne ay iyaga u fududeeyeen qaraxan aroortii hore ka dhacay magaalada Belet Weyne.
Sikastaba dadaalada ka socda magaalada Belet Weyne ayaan loo hakin doonin shaqsi amaba kooxaha argagixisada ah iyo kuwa fowdada ku taageera markasta oo la doonayo in Hiiraan loo helo nidaam iyo kala danbeyn.
La soco wararkeena danbe iyo Hiiraan.
· admin on January 24 2012 05:59:43 · 0 Comments · 1474 Reads ·
14,612,326 unique visits